Fahazoan’ny orinasa miasa: ny fiantohan’ny mpampiasa ny fitaterana | NewsMada
Fahazoan’ny orinasa miasa: ny fiantohan’ny mpampiasa ny fitaterana
Fepetra noraisina eto Analamanga na mbola mitohy aza ny fihibohana ny fahazoan’ireo orinasa rehetra miasa, fa manaraka ny fepetra apetraka hisakanana ny covid-19 sy fanajana feno ny zon’ny mpiasa.
Zava-dehibe nosoritan’ny minisitry ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa, ny fiantohan’ny mpampiasa ny fitaterana mpiasa, ao anatin’izany ny fanajana ireo fepetra rehetra tsy hiparitahan’ny aretina, fanadiovana ny toeram-piasana. Manoloana izany, nanambara ny minisitra ny fisian’ny fihaonana tamin’ireo mpampiasa, indrindra ny mpitantana ireo orinasa afakaba, ny herinandro lasa teo. Io fitaterana io indrindra no tena olana hatramin’izay tsy fisian’ny fitateram-bahoaka izay.
Tsy vao izao fa efa nisy ihany ireo orinasa sasany nanohy ny asany, saingy vesatra ho azy ireny ny fiantohana ny fitaterana mpiasa anjatony any amin’ny orinasa raha ny nambaran’ireo mpitantana. Ny mpiasa, ankoatra izay mbola voatazona, betsaka ny efa natsahatra (chômage technique), noho ny krizy mahazo ny orinasa, naroson’ny filohan’ny Vondrona orinasa tsy miankina (Gem), Rajaona Thierry.
Amin’izao 15 andro manaraka ao anatin’ny hamehana izao, nilaza ny minisitra Rakotomalala Lantosoa, fa hisy ny fanaraha-maso miaraka amin’ny minisitera misahana ny asa. Ao anatin’izany ny fitaterana sy fanajana ireo fepetra hafa rehetra.
Varotra amina serasera
Nanentanan’ny minisitra ny fampiharana télétravail, fanaovana asa avy any an-trano. “Omena fitaovana iantohan’ny orinasa izay afaka manao télétravail, mba hahavitsy indrindra ny mankany am-piasana. Toy izany koa ny fanaovana varotra amina serasera, betsaka ny mampihatra izany, ankehitriny, amin’ny fanaterana entam-barotra any amin’ny mpanjifa. Manana traikefa amin’io isika”, hoy ny minisitra. Misy ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina fiadiana amin’ity valanaretina ity, miaraka amin’ny toeram-pitsaboana samihafa, toy ny Ostie, fitiliana any amin’ny toeram-piasana, fizarana CVO.